Muxuu ahaa ficilkii ay adduunyada kubadda cagta ka yaabtay uu xalay sameeyay Luis Suarez kulankii Chile? – Gool FM
(Brazil) 25 June 2019. Weeraryahanka qaranka Uruguay Luis Suarez ayaa xalay ka yaabsaday adduunyada kubadda cagta kadib markii uu muran ka keenay goolhaye isagoo xerada ganaaxa ku jira kubad gacanta kaga badbaadiyay, waxey aheyd wixii ugu qosolka badnaa ee la daawado inta uu socday koobka koonfurta America.
Arrin kale oo xiiso leh ayaa ka dhacday garoonka isla kulankii dhexmaray wadamada Chile iyo Uruguay, taageere ayaa soo galay garoonka, balse daafaca xulka Chile Gonzalo Jara ayaa caawiyay ilaalada garoonka maadaama uu jalaafay shaqsigii garoonka kusoo dhex orday.
Luis Suarez wuxuu u orday dhanka garsoorka isagoo ka dalbanaya in Gonzalo Jara oo ilaalada garoonka caawiyay la siiyo kaarka jaalaha, waxeyna aheyd sheeko ka xiiso badan midda uu goolhayaha cabashada kaga gudbiyay.
Esse jogo tá cheio de coisa estranha 😂 pic.twitter.com/omSEoPVemZ
— Resta1 Futebol (@Resta1_Futebol) 25 June 2019
Daqiiqadii 21-aad ayuu Luis Suarez isku dayay inuu xulkiisa gool u dhaliyo, si fiican ayuu u xariiftamay ka hor inta uusan goolhaye Gabriel Arias inta ka daba yimaado kubadda gacanta uga badbaadin isagoo ku sugan xeradiisa ganaaxa, waxeyna aheyd marka uu garsoorka u sheegay Suarez in kubadda gacanta lagu badbaadiyay isla markaana ay tahay in rigoore lagu abaalmariyo.
Luis Suarez waa xiddig mar walba garsoorka ku cadaadiya rabitaankiisa, balse labadii ficil uu xalay sameeyay waxey ahaayeen kuwa layaab ku noqday taageerayaasha kubadda cagta.